POS - Bits Century
Cloud Based ကွန်ပြူတာ စနစ်
လူကြီးမင်း၏ အရောင်းဆိုင်ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ်နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
BC POS ကို English + Myanmar ၂မျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Window, IOS, Tablet, Mobile တို့ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
BC POS သည် Cloud Based ဖြစ်သော ကြောင့် Bits Century မှ Software Update ပြုလုပ်တိုင်း Lifetime ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Support Tickert နှင့် Tutorials များကိုပါ အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Admin နှင့် Cashier Role အပြင် Sale Commissions Agent များအပြင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းစိတ်တိုင်းကျ Custom Role ပြုလုပ်နိုင်သလို ဝန်ထမ်းများကို စိတ်တိုင်းကျ Permission ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖောက်သည်များ (သို့) ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ အဖြစ် Contact lists တွင် ခွဲခြားမှတ်သားထားနိုင်ပြီး ဖောက်သည် တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ဝယ်ယူမှုပမာဏ နှင့် လက်ကျန်ငွေပမာဏ ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဖောက်သည် တစ်ဉီးချင်းစီအလိုက် Documents နှင့် Notes များအားသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
ဆိုင်ခွဲများ / ဆိုင်မျိုးစုံ
Multi Branch & Location
လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် နဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းကို ဆိုင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ (သို့) ဆိုင်ခွဲများအားလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
စာရင်းနှင့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကိုလဲ ဆိုင်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကြည့်ရှုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန်စာရင်းများ ၊ ဝယ်ယူမှုများ ၊ ရောင်းချမှုများအပြင် ၊ ကုန်ကျစရိတ်များကိုပါ ဆိုင်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ဆိုင်ခွဲတစ်ခုခြင်းစီအလိုက် Invoice, ငွေတောင်းခံလွှာ ၊ ပြေစာကို စိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများ ( သို့ ) ဝန်ဆောင်မှုများ
ကုန်ပစ္စည်းထည့်သွင်းရာတွင် Single နှင့် Variable အားခွဲခြားနိုင်ပြီး Brand, Category, Sub Category နှင့် Units (ခု,မျိုး,ထုပ်,ပိသာ,လုံး) အလိုက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန် အလိုအလျောက်အသိပေးမှုအား စိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ( ex: ဆိုင်တွင် mi ဖုန်း ၃လုံးသာကျန်ရှိလျှင် အသိပေးပါ။ )
Profil ( Margin ) အမြတ်ငွေ စိတ်တိုင်းကျ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သလို ( Percentage - % ရာခိုင်နှုန်း ) ထည့်သွင်းရုံဖြင့်လဲ အလိုက်အလျောက် ရောင်းစျေးအား သတ်မှတ်ပေးသည်။
ကုန်ကျစရိတ်များကို အမျိုးအစား ( Category ) အလိုက်
ရောင်းချရာတွင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော Dashboard ပုံစံဖြစ်ပြီး ၊ walk-in-customer လမ်းကြုံဝယ်ယူသူ (သို့) Contact Lists အတွင်းမှ ဝယ်ယူသူအားရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရောင်းချရာတွင် Draft ခတ္တေ ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ဝယ်ယူမှုအားမှတ်သားထားနိုင်သည်။
Category, Search Box မှတဆင့် ကုန်ပစ္စည်းအား ရှာဖွေနိုင်သလို Barcodes Scanner ဖြင့်လဲ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး Printer ဖြင့် ပြေစာရယူနိုင်သည်။
ကျသင့်ငွေပေးချေရာတွင် လျော့စျေးနှင့် အခွန်ငွေပါ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး လက်ငင်းငွေပေးချေမှု နှင့် ပေးချေရန်ကျန်ရှိသော ငွေများအား မှတ်သားထားနိုင်သည်။
ပေးချေရန်ကျန်ရှိသော ငွေများကို အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ကြိုတင် အသိပေးမှု ရရှိနိုင်သည်။
ဝယ်ယူမှုနှင့် ရောင်းချမှု စာရင်းများ
အခွန် Report များ
Contact Report များ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် (Stocks) Report များ
အသုံးစရိတ် Report များ
ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ( Brand, Category, Sub-Category, Units, Dates ) အလိုက်
Daily, Monthly,Yearly ဖြင့် ဆိုင်ခွဲအလိုက် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Excel,PDF,CSV Fomat များဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
လူကြီးမင်း၏ လက်လီအရောင်းဆိုင်ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
English + Myanmar
လူကြီးမင်း၏ အီလက်ထရောနစ်အရောင်းဆိုင်ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Computer & Mobile အရောင်းဆိုင်များ
လူကြီးမင်း၏ Computer & Mobile အရောင်းဆိုင်ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ ဆေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ Liquor အရောင်းဆိုင်ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ စားသောက်ဆိုင်များ ၊ Bar များကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Waiter to Kitchen
Waiter to Cashier
Silp By Tables
Services & Repair POS
လူကြီးမင်း၏ Services & Repair လုပ်ငန်းကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Customer can check Repair Status online
လူကြီးမင်း၏ Salon & Spa ကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ Laundary လုပ်ငန်းကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Fashion Store POS
လူကြီးမင်း၏ Fashion Store အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ၊ အရှုံးအမြတ် နှင့် Reports မျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Cloud Based BC POS ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Customized Functions & Features
1 Store & Locations
အသုံးပြုသူ - ၁ ယောက်
Products - ၁၀၀ ခု
Free Fight Covid
3 Store & Locations
အသုံးပြုသူ - ၃ ယောက်
Products - အကန့်အသတ်မရှိ
10% Off Fight Covid
6 Store & Locations
အသုံးပြုသူ - ၆ ယောက်
20% Off Fight Covid
Language ဘယ်နှစ်မျိုးရပါသလဲ ?
Myanmar + English ၂ မျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Online & Offline ဘာကွာပါသလဲ ?
BC POS သည် Cloud Based ဖြစ်သော ကြောင့် Online ဆိုပါက Desktop App, Mobile ( Android + IOS ) ဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၊ Offline သည် နှစ်စဉ်ကြေးပေးချေစရာမလိုပါ။ Offline တွင် Multi Branch ဆိုင်ခွဲများအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။
အစမ်းသုံးကြည့်နိုင်ရန် နှင့် Free Version ရယူလိုပါက အပေါ်က Form တွင်မှန်ကန်စွာဖြည်ပြီး Bits Century မှအစမ်းသုံးနိုင်ရန် လိုအပ်သည်များကို ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။